Pascua Lama, Shily: Famindràna Vongan-dranomandry Telo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2017 16:37 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, Español, English
(Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia nivoaka tamin'ny Febroary 2007)
Azonao sary an-tsaina ve ny famindràna ireo vongan-dranomandry telo maharakotra ny tany efitra maina indrindra eto ambonin'ny tany mba hitrandrahana volamena sy volafotsy? Hankatoavinao ve ny lalàna iray manome alalana orinasa mpitrandraka tsy miankina iray mba hanana fahafahana ara-toekarena eo amin'ny sisintany manasaraka firenena roa? Izany no tantara mampahonenan'i Pascua Lama.
Mba hahazoana fampidirana mazava tsara mikasika ilay olana, manazava ny maha-zava-dehibe azy amin'ny antsipirihany ny fcadia (Es)
Tetikasa fitrandrahana harena ankibon'ny tany misy eo aminà firenena roa ny Pascua Lama izay antenain'ilay orinasa maro rantsana mpitrandraka, Barrick Gold, hapetraka any amin'ireo tendrombohitra avo Shiliàna sy Arzantina. Ao Shily, ao amin'ny faritra fahatelo (Faritra Atacama) no misy ilay toerana ary ao Arzantina ao amin'ny Faritany San Juan. Mitentina 1,45 miliara dolara ny famatsiambola niaingàna, hanao fikarohana izy ireo mba hitrandrahana volamena izay any ambanin'ireo vongandranomandry an'arivo taonany, tahirin-drano any amin'ny tany hay indrindra eto ambonin'ny tany.
Mba hahafahana mampiroborobo ny tetikasa eo amin'io faritra io, nilaina ny manana lalàna manome alalana manokana an'ireo orinasa, ambonin'ireo lalànam-pirenena. Ary dia nandrafitra andàlana araka ny lalàna nankatoavina tamin'ny taona 1997 ilay orinasa, avy tamin'ireo mpitondra tamin'izany fotoana dia i Carlos Menem (Arzantina) sy Eduardo Frei (Shily). Ny lanja stratejika ananan'i Pascua Lama ao anatin'ilay fifanarahana fitrandrahna harena ankibon'ny tany, raha mihodina ilay tetikasa, dia hisy savaravina iray hiorina izay manome antoka ireo orinasa rehetra manana rantsana aminà firenena maromaro mba ho tompon'ireo harena ankibon'ny tany ao amin'ny sisintany manelanelana an'i Shily sy Arzantina. Noho izany, ny fiandrianam-pirenena sy ny fanarahamaso ny rano (ireo tendrombohitra no renin'ny ranonay) ary ireo harena mineraly izay tsy mbola voatrandraka tao Arzantina noho ny fahasarotan'ny fitaterana, dia ho tavanin'ireo orinasa maro rantsana sy mpitsentsitra. Hanorina fanjakazakana ara-toekarena tsy azo kitikitihana izy ireo ao amin'ireo faritra natoraly izay nohajain'ireo vahoakanay sy nohajariany nandritra ny taonjato maro.
Maniry haka hitrandraka volamena manodidina ny 481 taonina sy volafotsy 18000 taonina ilay tetikasa, mba hahazoana vokatra volamena manodidina ny 21-22 taonina isan-taona sy volafotsy 850 taonina eo ho eo mandritra ireo folo taona voalohany.
Maro ireo hetsi-panoherana sivily niforona hatramin'ny nipoiran'ilay tetikasa ho lohateny vaventy tany anatin'ireo gazety shiliàna.
Misy blaogy tsy ofisialy iray (Es) ihany koa izay mety ahitanao ireo lahatsoratra rehetra nanomboka ny volana Janoary 2006 mikasika ilay olana. Manana ‘fotoblog‘ ihany koa (Es) izy ireo izay ampahafantaran-dry zareo ireo hetsika koltoraly nataony mba hampahalalàna ny olona mikasika io olana io. Ny tambajotra iraisana, Atina Chile (Es) ihany koa manana tahirin-kevitra iaraha-miasa amin'ny aterineto sy famintinana iray ahitàna ireo vaovao rehetra mikasika io tranga io.